Mkpesa n'okporo ụzọ na -eme ihe ike malitere na Sydney na Melbourne, jidere ọtụtụ narị mmadụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Mkpesa n'okporo ụzọ na -eme ihe ike malitere na Sydney na Melbourne, jidere ọtụtụ narị mmadụ
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Tupu ngagharị ahụ, ndị uwe ojii kwupụtara amụma enweghị ntachi obi maka ngagharị iwe ọ bụla na Sydney, ebe onye osote onye uwe ojii New South Wales Mal Lanyon kwuru na a ga-ekenye ụfọdụ ndị ọrụ 1,400 maka ebumnuche ahụ.
Ndị Australia na-eme ngagharị iwe mgbochi mgbochi COVID.
Ngagharị iwe Sydney na Melbourne na -ebute esemokwu na ndị uwe ojii.
E jidere ọtụtụ ndị ngagharị iwe.
Ngagharị iwe na -ebilite taa na isi obodo abụọ nke Australia. Ihe ngosi n'ehihie Satọde na Sydney na Melbourne, ebe puku kwuru puku ndị Australia na-akatọ usoro mgbochi COVID-19 na-aga n'ihu, mkpọchi coronavirus na iwu mgbochi, na-akpọpụta mkpọsa na ibuli ihe mgbochi mgbochi, gbalitere ngwa ngwa n'ime ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọnụ na ndị uwe ojii, ndị zara ya. ose, mgbochi ụzọ na usoro njide.
Ihe onyonyo na -agagharị na ntanetị gosipụtara igwe mmadụ na -agafe na Melbourne, ebe ụfọdụ na -enwe nnukwu ọnụnọ ndị uwe ojii na -ebuso igbochi ngagharị ahụ. A wụsara ndị na -eme ngagharị iwe na nzaghachi.
A na -esekwa ọtụtụ njide na Sydney, ebe a nụrụ ka otu nwoke na -eti mkpu "gịnị kpatara ị na -ejide m?" ka ndị uwe ojii chụpụrụ ya.
Tupu ngagharị ahụ, ndị uwe ojii kwupụtara amụma enweghị ntachi obi maka ngagharị iwe ọ bụla na Sydney, ebe osote kọmishọna ndị uwe ojii New South Wales Mal Lanyon kwuru na a ga-etinye ụfọdụ ndị ọrụ 1,400 maka ebumnuche ahụ. Lanyon siri ọnwụ "Nke a abụghị maka ịkwụsị ikwu okwu efu, nke a bụ ịkwụsị mgbasa nke nje," ebe onye minista uwe ojii steeti David Elliott dọrọ aka ná ntị na ndị ngagharị iwe ga -eche "ike ndị uwe ojii NSW."
Na mgbakwunye na nnukwu mbubata ndị uwe ojii, ndị ọchịchị nyekwara iwu ka ọrụ rideshare ghara iburu ndị njem banye na Central Business District nke Sydney, ebe ụgbọ oloko agaghị akwụsị na ọdụ ụfọdụ n'ofe obodo ahụ, dịka akụkọ mpaghara si kwuo. A hụkwara ihe mgbochi ndị uwe ojii na Sydney, mbọ imechi nnukwu okporo ụzọ iji mee ngagharị iwe.
Ngosipụta a na-abịa n'oge na-adịghị anya mgbe ndị isi na New South Wales kwupụtara mkpọchi COVID-19 gbatịrị na Fraịde, atọrọ itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara SydneyNdị bi na nde 5 nọ n'okpuru mgbede abalị ruo etiti Septemba. Usoro yiri nke ahụ adịlarị na Melbourne, nke pụtara ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke AustraliaỌnụ ọgụgụ ndị mmadụ ga -anọ n'okpuru mgbochi mkpọchi, nke chọrọ ndị bi ka ha nọrọ n'ụlọ na ihe ole na ole.
Onye isi ala NSW Gladys Berejiklian rụrụ ụka na ọ dị mkpa ịmegharị ahụ iji belata mgbasa nke ụdị Delta na -efe efe nke ukwuu, nke butere ọrịa n'ofe steeti ahụ. Ọ kọọrọ ọrịa 825 mpaghara butere na Satọde, mmụba dị ukwuu site na 644 gbagoro ụbọchị gara aga.
Steeti Victoria, ebe Melbourne dị, emeela nke ọma n'izu ndị na -adịbeghị anya, n'agbanyeghị na ọ na -amalite ịhụ ọnọdụ dị elu, na -akọ akụkọ 61 n'ime awa 24 gara aga, site na 57 n'ime ụbọchị abụọ gara aga. Victoria kụrụ ọnụ ọgụgụ ya kacha elu n'August gara aga, mgbe ọ hụrụ oke ọrịa 687 n'otu ụbọchị.